HOUSTON TRANSCRIPTION Service - Peeji nke mbụ
HOUSTON TRANSCRIPTION Service
HOUSTON TRANSCRIPTION Service maka asụsụ niile
Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) anọwo na-enye ọrụ idegharị gburugburu ụwa ihe karịrị afọ 30. Anyị na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche ma na -edegharị ihe karịrị asụsụ 150. Na Houston, a na -akpọkarị anyị ka anyị nye ọrụ ntụgharị, ikekwe n'ihi na ndị na -ede akwụkwọ Houston anyị nwere nka nke ukwuu ma zie ezi, ma nwee ike ịnabata ihe karịrị asụsụ 90 a na -asụ n'obodo ahụ. Ndị ahịa na -enyekarị anyị ndekọ ọdịyo n'ọtụtụ ụdị mgbasa ozi dị iche iche, gụnyere CD, DVD, cassettes ọdịyo, obere kaseti na teepu, yana faịlụ dijitalụ gụnyere DAT, MPEG, RA na MP3. Anyị na -edegharị ihe ọdịyo ka o doo anya, faịlụ ederede ziri ezi.
A na-ejikarị ọrụ idegharị ihe na mpaghara Houston n'ihi ọkwa nke ụlọ ọrụ ndị na-abụghị US ebe ahụ, nke na-achọkarị idegharị n'ọtụtụ asụsụ dị iche iche. Houston bụ ebe akụ na ụba 30th kachasị ukwuu n'ụwa, ndị bi na -asụ ihe karịrị asụsụ 90. Imepe usoro nkwukọrịta n'etiti ndị otu ọdịbendị dị iche iche nwere ike bụrụ ihe ịma aka, belụsọ na ị nwere ndị ọkachamara asụsụ na -arụ ọrụ na gị. Na mgbakwunye na Bekee, ndị ọkà mmụta asụsụ anyị na -edepụta asụsụ ndị a na -eji ugbu a na Houston, gụnyere Spanish, Vietnamese, Chinese na French, ịkpọ aha ole na ole.
A na -akwụ ụgwọ ọrụ transcript anyị n'otu n'otu dabere na ọtụtụ ihe dị iche iche. A na -ekpebi ọnụahịa oru ngo site na oge a kara aka, ogo ọdịyo, ọnụ ọgụgụ ndị na -ekwu okwu na ngwakọta asụsụ. Ọzọkwa, a na -ekpebi ọnụahịa ikpeazụ site n'ụdị faịlụ nke masịrị gị.
Iji mee ka nkwupụta anyị mee ngwa ngwa, AML-Global na-eji teknụzụ teknụzụ iji gbanwee faịlụ ka ọ bụrụ usoro dijitalụ kacha mma dị. Anyị na -edobe saịtị Protocol Transfer Protocol (FTP) maka ibugote faịlụ elektrọnikọn nke buru oke ibu maka sistemụ email ọkọlọtọ. Ndị na -edekọ ihe na Houston nwere nka na ahụmịhe yana teknụzụ anyị dị elu na -enye anyị ohere ịzaghachi ngwa ngwa arịrịọ gị, nke na -akwalite oge mgbanwe nke ukwuu.
Edere akwụkwọ mpịakọta Houston anyị nke ọma ma nwee ike ịdekọ ihe karịrị asụsụ 150. Kwe ka ndị ọrụ anyị nwere ahụmịhe na enyi nyere gị aka ngwa ngwa yana ọnụ ahịa nke ọma. Kpọtụrụ anyị maka ọnụego ma ọ bụ ịtụ ahịa taa.
N'ime asụsụ anyị na -edegharị bụ:
Eshia: Mandarin, Cantonese, Simplified & Chinese omenala, Korean, Japanese, Thai, Indonesian, Vietnamese, Cambodian, Hmong, Tagolag, Armenian, Turkish, Punjabi, Dari, Pashto, Hindi, Urdu, Lao, na Kurdish
EU: Spanish, Russian, French, German, Italian, Portuguese, Ukrainian, Polish, Hungarian, Danish, Dutch, Swedish, Finnish, Croatian, Serbian, Bosnian na Greek
Middle East/Afrịka: Arabic, Hibru, Farsi, Somali, Swahili, Afrikaans, Dinka, Zulu, na Mandingo
Ọrụ ntụgharị asụsụ Houston
Ọrụ ntụgharị akwụkwọ Houston
Ọnọdụ ụlọ ọrụ ntụgharị okwu Houston
Ọrụ Asụsụ America
Ekwentị: (832) 540-9140
Toll efu: (800) 951-5020
Sonyere otu Ourt
Kedu obodo ị bi?
Lelee ihe niile metụtara
Onye ntụgharị okwu
Onye na-eweta ndepụta okwu
Onye na-eweta CART
Depụta ụzọ abụọ asụsụ gị *